I-FITHEM KS-017 i-wirelessbandband ye-headphone yohlobo lwe-plug ipulaki ibhetri ingaxhasa ihedfoni yomdlalo omkhulu
Ibhethri lingu-110mAh lingadlala uMculo amahora angama-8-10 noma insizakalo ende kakhulu engenamanzi i-IPX5 CE, i-BIS kanye nochungechunge lwesitifiketi esihambisanayo kungaqinisekisa ikhwalithi yayo. I-Earphone Center Control Neck Hang Place yindawo yenkinobho yesitayela ewunxande isitayela esinengqondo more sense yenza umqondo womsebenzisi wokuthinta uthambe futhi unethezeke ukulawula isikhungo izinkinobho ezintathu zilula futhi zilula ukhiye wokwengeza ukuhlelela phezulu ukunyakaza okubili phambili ingoma, ukunciphisa ukhiye ulungisa phansi. Ukuchofoza kabili kuyingoma emuva. Inkinobho Ephakathi inkinobho yokumisa lapho umculo udlala. Ukuchofoza kabili inkinobho yokuqala.
I-FITHEM KS-015 i-headphone engenantambo ekhangayo ishintsha isifakwakhanda ishaja ngokushesha ihedfoni ye-Bluetooth
Le ks-015 inguqulo yakamuva yekhaya lami futhi inomsebenzi wokumunca amandla kazibuthe ukushaja okusheshayo ukuze kuhlangatshezwane kangcono nezidingo zemakethe, kuthuthukiswe izakhiwo zomkhiqizo nazo zihlangabezane nezidingo zabathengi abaningi.
I-FITHEM KS-010 i-headphone engenantambo ye-Bluetooth ishaja enkulu ishaja yesitayela se-ODM esheshayo
Isingeniso Sezinto Zomkhiqizo: Okwenziwe nge-Silica Gel ngemuva kwento yokufaka indlebe yebhande entanyeni endlebeni ethambile kakhulu futhi ukufaka indlebe ngoPhondo kungafinyelela umphumela wokwehliswa komsindo ngokomzimba ngemuva kokuthi ibhande lentamo nalo lenze isivivinyo sobungcweti sokuzivikela endlebeni engenamanzi nalo lihle kakhulu i-IPX5 I-earphone jikelele ingumklamo wegolide wesilinganiso. Kunamabhangqa amathathu ama-earbud ahlanganiswe nezindlebe ezisebenziseka kalula ukukhulisa intshisekelo yomsebenzisi. Izimbobo zokushaja zakamuva ze-TYPE-C.
I-Fithem Ks-816 engenantambo ye-bluetooth tws headset engaphansi kwe-treble ingenziwa ilogo eyenziwe ngokwezifiso
Kusukela ekubukeni nasekuphetheni ngekhwalithi, imodeli yangasese yefektri / ukwesekwa kwelogo okwenziwe ngefektri / i-Bluetooth 5.0 / IPx5 engenamanzi ikhwalithi yomsindo ye-HIFI, ukuthungwa kwe-retro matte, siyimodeli edidiyelwe yomkhakha nokuhweba ngesikebhe, ikhwalithi yomsindo engonakalisi, emnene nenhle ukulalela Umsindo omsulwa Wokuthula.
I-Ks-012 fithem gaming sports sports wireless headset i-bluetooth neckband earphone IPX5 indlebe engangeni manzi
• Idizayini enkulu kakhulu yomthamo webhethri wempilo yebhethri ende
• Ukuvuselelwa okusha kwe-Bluetooth 5.0, ukuxhumana okuzinzile
• Ikhwalithi yomsindo esanda kulungiswa, iyahamba ngokwengeziwe
• I-IPx5 ayinamanzi, ayinamanzi ajulile futhi ayinamanzi
• Amabhasi asindayo, umsindo wesitiriyo wesine
I-Ks-008 fithem yokudlala amanzi engenantambo i-headset ye-bluetooth ne-headset yesikebhe umsizi omuhle wehhovisi lezemidlalo nokungcebeleka
1. Mkhiqizo isingeniso: ukuma strip kungaba phinda indaba ngentando
2. Isistimu ye-IPx5 engenamanzi ivikela kangcono ihedsethi
3. Lalela ngokukhululeka umsindo ozungeze i-3D, ogxilile, okhethekile womculo